***** Inhlangothi ezitshiyeneyo eziphatheke emkhankasweni wokuthukululwa kwamagagasi zikhalaze kubameli bezigaba ukuthi bafuqe udaba lokusungulwa kwemisakazo yezabelo ama Community Radio Stations laho besedale lephalamende.
**********Udubo lokusilela kwamafutha ezimotha luqubekela phambili elizweni kodwa uhulumende esithi akhona enele umuntu wonke elizweni.
********Abenkampani kagetsi eyeZimbabwe Electricity Supply Authority bathi sebezaqala uhlelo lokuvalela izakhamizi ugetsi okwamahola athile njengendlela yokwabela ngokulingeneyo njengoba esesilela, kubangelwa yikwehla kwesilinganiso salamagetsi agaywa esithitshini eseKariba, ngenxa yokwehla kwesilinganiso samanzi edamini le Lake Kariba.
************ Umqeqetshi weqembu le Highlanders uMadinda Ndlovu uthi akula mehluko phakathi kweqembu lakhe lele Chicken Inn lona abazangqikilana lalo ngoMgqibelo enkundleni ye Barbourfields.
***********Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi wengoma zomdumo owe Afro Jazz, uSipho Mbambo odume ngegama lokuthi Zimdabule.
********** KuLiveTalk namuhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimotha elizweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani imlayezelo kunombolo ezithi 0012024650318. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kuStudio 7 ngo half past 7 ntambama lango half past 6 ekuseni, kumagagasi athi 909 am, 4930, 15580 laku 6080 kilohertz kuShortwave.